Questions/Answers | Nepal Hypnosis PsychoSocial Care Center
Read more about रीस किन उठ्छ ?
Read more about My Son Has an Attitude Problem
Read more about How do I know it is time to look for professional psychological psychotherapy?
म ४० बसन्त पार गर्नै लागेको मान्छे परें । मैले विवाह गरेको पनि झन्डै १७ वर्षपुग्न लागेछ । सुरु-सुरुका दिनबाहेक मैले उनलाई मनदेखि माया गर्न सकिनँ । हरेक घरायसी क्रियाकलापमा कुरा नमिल्ने त छँदैछ, कुनै पनि विषयमा कुरा मिल्दैन । हरेक प्रयास गर्दै सँगै बस्ने समय मिलायो, तुरुन्तै झगडा भइहाल्छ । हाम्रा दुई सन्तान पनि छन् । कठोर निर्णय लिन पनि अलि गाह्रो छ । आजभोलि सोच्दै छु, छुट्टिने वा पारपाचुके नै गर्ने । मेरा लागि अब उपयुक्त बाटो के होला ? सुझाव पाए आभारी हुने थिएँ । ~ कृष्णजङ MD, USA
Read more about सोच्दै छु, छुट्टिने वा पारपाचुके नै गर्ने !
Read more about मेरो छोरा मसंग नजिक हुनै मान्दैन !